Shiinaha Kaarboonka Taarikada taarikada jir Soosaarka iyo Warshadda | Yan Tuo
Qeexitaanka alaabta: Si adag ayaa loo habeeyay iyadoo loo eegayo sawirada, waxaana loo habeyn karaa wadamada kale taarikada taarikada iyo noocyada kala duwan ee alaabooyinka wax lagu shubay. Fadlan la tasho adeegga macaamiisha si aad u go'aamiso qaabka iyo qiimaha markaad dalbanayso amar.
Faahfaahinta 140mm * 450mm * 2mm Xirmada Gaadiidka Sanduuqa Warqadda, Xumbada, Bacda Cadaadiska Sare
Shuruudaha Bixinta T / T, D / P, Western Union, Paypal Awood Wax soosaar: 50, 000 Cadad ah Bishiiba
Qalabka ceeriin Fiber Kaarboon-ku-saleysan Polyacrylonitrile Waxqabadka Nooca Awoodda Sare
Mashiinka taarikada liisanka kaarboon kaarboon saafi ah ayaa ka duwan taarikada taarikada liisanka taarikada fiber-ka oo ku saleysan ABS ama aluminium. Waxay ka kooban tahay maro fiber kaarboon tayo sare leh iyo cusbi. Waa miisaan fudud, ku wanaagsan ku adkaysiga, muuqaal muuqaal leh, heer sare leh oo deeqsi ah, waaraya oo joogto ah. Ma daxalaysto, oo waxaa lagu qalabeeyaa qaybo muuqaalka ugu caansan ee baabuurta maanta. Way ka duwan tahay walxaha biraha caadiga ah. Qalabka birta ah ayaa si fudud loo daxalaa by electroplating. Birta aan xarka lahayn ayaa si fudud u duugoobay ka dib markii la isticmaalay muddo cayiman, hurdi iyo midab beddelid, halka jirku uu taarikada liisanka taarikada lihi ka muuqan doonin xaaladdan.
Buugga wax soo saarka
1. Tilmaamaha alaabada: Si adag ayaa loo habeeyay iyadoo loo eegayo sawirada, waxaana loo habeyn karaa wadamada kale taarikada taarikada iyo noocyada kala duwan ee alaabada la mideeyay. Fadlan la tasho adeegga macaamiisha si aad u go'aamiso qaabka iyo qiimaha markaad dalbanayso amar.
2. Waxyaabaha: maadada kaarboon kaarboon saafi ah, xoog sare iyo miisaan fudud;
3. Habka wax soo saarka: caaryada heerka sare ee birta ah, wax taaj oo kale oo adag oo wax taaj oo kale ah;
4. LOGO waa la habeyn karaa
Shirkadeena waa R&D wax soo saar iyo soo saare wax soo saar iyadoo la isticmaalayo fiber kaarboon ahaan maadada ceyriinka. Waxay leedahay khibrad wax soo saar hodan ah iyo qaab maareyn qaan gaar ah, horumarinta caaryada iyo wax soo saarka wax soo saarka, wax soo saarka ka dambeeya iyo wax soo saarka baakadaha, waxayna leedahay waax QC u gaar ah oo si adag u xakameysa tayada wax soo saar kasta. Tallaabo kasta oo geeddi-socodka ah. Waxaan ku dadaalnaa inaan ku siino waxyaabaha kaarboon kaarboonka ah. Macaamiisha ayaa ku siin kara shaybaarro horumarineed, ama horumarin iyo soo-saar ku saleysan sawirro iyo fikrado. Faylka kaarboonku wuxuu leeyahay saamayn durdur oo u gaar ah, waa ka khafiifsan yahay, u adkeysanaya heerkulka sare iyo cadaadiska, wuxuuna u adkaystaa foorarka. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan qaybaha nolosha.
Hore: Qalabka hawada ee kaarboonka
Xiga: 3K PlainTwill waxay jareysaa Xaashida Kaarboonka Fiber